NYI LYNN SECK 18+ DEN: Alphabetum Barmanum: The First Burmese Printed Alphabets
Posted by NLS at 5/14/2010 02:13:00 AM
10 Responses to “Alphabetum Barmanum: The First Burmese Printed Alphabets”
Sa Lein said...
စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်. ကျေးဇူးပါ...
ကိုညီလင်းဆက် စာတော်တော်ဖတ်နိုင်တယ်...ချီးကျူးပါတယ်...ဆက်လက်ပြီး နောက်ဗဟုသုတရစရာလေးများ စောင့်မျှော်နေပါတယ်...ကျေးဇူးပါ...
Thanks million! You are respectable.
တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်ဗျာ။ ခုလိုမျှဝေတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ။
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ................ ကျတော်လိုချင်တာလေးရလိုက်လို့
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်..ကျေးဇူး ကိုညီလင်းဆက်..။
ချီးကျူးတရ်ဗျာ ... ကိုယ့်ကိုကိုယ်စာဖတ်တော်တော်ဝါသနာပါလှပြီထင်တာ ... ကိုယ့်ထက်ဗဟုသုတရှိတဲ့သူ ... ဒီလိုမျိုးတွေ ... ကျွန်တော်မပြောတတ်တော့ဘူး ... သေချာတာကတော့ အကို့ကို လေးစားတရ် ... ချီးကျူးပါတရ် ...
အကို့ဆီမှာ စာလာလာဖတ်ပေမဲ့ တစ်ခါမှမရေးခဲ့ဖူးဘူး ... အမှားပါသွားခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါ ...
ကျွန်တော်ခပ်သဲ့သဲ့ပဲကြားဖူးပြီး အင်မတန်သိချင်လွန်းလို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက ရှာနေတဲ့စာအုပ်ကို မထင်မှတ်ဘဲ ကိုညီလင်းဆက်ဆီမှာ အခုမှ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ။ ကျေးဇူးဗျာ။ ဒေါင်းလို့တော့ မရသေးဘူးဗျ။
I use this for my thesis.